Iindaba - Kukangaphi zixhobo ze-screw press zitshintshwa?
Abathengi abaninzi baya kubuza ukuba zingaphi izihlandlo zokutshintsha izixhobo zesikrufu xa bathenga? Kubonakala ngathi ingqalelo yomsebenzisi kule ngxaki iphezulu kakhulu. Namhlanje, kweli thuba, ndingathanda ukuphendula le mibuzo ngokweenkcukacha.
Hlalutya ngononophelo, izixhobo zokushicilela ioyile zahlulwe zangamalungu okunxiba kunye nezinto. Njengoko igama lisitsho, ukunxiba izinto eziyinxalenye ekufuneka zitshintshwe rhoqo, kwaye iinxalenye zinobomi obude kwaye azidingi kutshintshwa. Izinto ezinxitywayo kunye nezinye izinto kumatshini weoyile.
Iindawo ezinxitywayo zescrew oyile cofa ngokubanzi zibandakanya: cofa othini, cofa iqhosha lemenyu, iringi yentsimbi, i-bushing, igqabi lesondlo, isangqa sekeyiki, isitshizi, ibar yeendaba, njl.
Amacandelo e-oyile e-Spiral ngokubanzi abandakanya: umzimba we-oyile, cofa ikheji, isakhelo, njl.
Umthamo we-260 yeoyile yokucinezela ziitoni ezingama-30-50. Kutheni le nto amandla onyango ehlwempu? Oku kugqitywa ngokweoyile. Umzekelo, xa i-screw cofa ucinezela amandongomane, ubunzima beepeanuts ziphantsi, ke kulula ukuba ucofe, kwaye ukunxiba komatshini kuncinci. Ke ngoko, umjikelo wokubuyiselwa kwezinto ezincedisayo ixesha elide kunye nomthamo wokulungisa mkhulu. Xa ucinezela imbewu ye-melon, icinezelwe ngeqokobhe. Ubulukhuni beoyile buphezulu, kwaye ukunxiba kwangaphakathi kwegumbi lokushicilela le-oyile kucinezelekile. Umjikelo wezinto zokubuyisela endaweni uya kuba mfutshane, kwaye amandla okuqhubekeka aya kuba mancinci. Ngokubanzi, ngaphandle kwamalungu asemngciphekweni, isicinezelo seoyile sisetyenzisiwe ngaphezulu kweminyaka elishumi ngaphandle kwengxaki. Izixhobo zomatshini wokushicilela weoyile zenziwa zonke iiyure ezingama-24 zecarbon ephezulu kunye nonyango lwe-nitrogen. Sinabasebenzi bethu bobuchwephesha bobuchwephesha, iworkshop yokuqhubela phambili yemveliso, iqela lemveliso yobuchule kunye neqela lokuthengisa. I-100% yokuqinisekisa umgangatho wemveliso kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa.
Isixhobo sokucinezela seoyile esenziwe ikakhulu kwigumbi lokushicilela, isakhelo, ibhokisi yegiya, ujije umgama opheleleyo kunye nezibuko lokondla. Ezinye izincedisi kwi-shaft shaft nakwibhokisi yegiya kulula ukuzibuyisela. Ezi zinto zixhomekeke ikakhulu ku-shaft shaft, kwi-screw press, kwi-ring ring, bushing, kwi-ring ring, kwi-scraper, kwi-bar bar, kwivili elikhulu kunye nelincinci, ukuthwala, umkhono we-shaft, njl njl. I-slag, okanye imveliso ephantsi, akukho zixhobo, oko kukuthi, iinxalenye zomatshini wakho ziyagula kwaye kufuneka zitshintshwe.
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Zonke iiMveliso Umatshini wokushicilela ioyile, Umatshini wokushicilela weoyile encinci, Imithombo yeendaba yeoyile yeOlive, Ingqele Cofa Umatshini weoyile, Umthengisi weoyile, Imbewu yeNtengiso yeoyile,